In ka badan 10-ruux oo ku geeriyootay qarax miino ka dhacay duleedka Muqdisho (Sawirro) – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya deegaanka Lafoole ee dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegaya in qarax miino kuwa dhulka lagu aaso uu qabsaday gaari kuwa dadweynaha ee loo yaqaano BL-ka, kaasoo gebi ahaanba bur buray.
Sida ay sheegayaan wararka qaraxan miino oo lagu aasay wadada laamiga ayaa waxaa lala beegsaday gaariga BL-ka oo ka baxay Muqdisho, kuna sii jeeday Afgooye.
Wakaalada Wararka SONNA ayaa sheegaya in illaa 12 ruux ay ku dhinteen qaraxan miino, halka tiro kale ku dhaawacmeen.
Dadka ku dhintay qaraxa miino ayaa waxaa ka mid ahaa aabe iyo labo caruur uu dhalay, kuwaasoo ku jiray rakaabkii saarnaa gaariga.
Halka uu qaraxa ka dhacay ee ah Lafoole ayaa waxaa horay uga dhacay qaraxyo lala eegtay Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Goobta qaraxa la geliyay oo aheyd bartanka Laamiga ayaa noqotay mid aad u qodantay, waxaana qaraxa uu ahaa mid aad u cuslaa, marka loo eego sida goobta qaraxa la geliyay uu god u noqday.
Sawirro ay soo bandhigtay Wakaalada Wararka ee SONNA ayaa muujinaya khasaaraha baaxada leh ee gaaray gaariga BL-ka, kaasoo gebi ahaanba bur buray.
Duqa muqdisho oo Kormeerey dayactir ka Socdo Wadada Wadnaha (Daawo Sawirro)